🥇 ▷ Motorola One Macro: Soo Kicid Cusub oo Keliya ayaa la soo gaadhay Internetka! ✅
Motorola One Macro: Soo Kicid Cusub oo Keliya ayaa la soo gaadhay Internetka!
Sannadkan Motorola, oo ay leedahay shirkadda Lenovo, ayaa soo saartay dhowr taleefanno oo casri ah oo hoos imanaya nooca ‘One’. Kuwani waa Hal Himilo, Hal Ficil iyo Hal Zoor. Haatan shirkaddu waxay diyaar u tahay inay soo saarto taleefan kale oo casri ah, oo loo yaqaan Motorola One Macro.
Qalabkan oo leh nambarka nooca ‘XT2016-1’ wuxuu kasoo muuqday NBTC, kaasoo ah wakaaladda shahaadooyinka ee Thailand. Nambarka nambarka wuxuu la jaan qaadayaa taleefannada casriga ah ee horey loogu dhajiyay isla isla khadkaas. Si kastaba ha noqotee, dukumiintiku ma muujinayo wax kale oo badan haddii aan la bilaabin hawsha shahaadaynta. Markaa dhakhso ayey u imaan kartaa.
Waxa la ogyahay in Motorola One Macro ah lagu arkay masraxa ‘Geekbench’, oo kashifaysa qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan taleefanka casriga ah ee soo socda. Tani waxay muujineysaa in aaladda ay ku shaqeyn doonto processor octa-core oo ka shaqeeya 1.9 GHz. Waxay u badan tahay inay noqon doonto Helio P60 oo ku biiraya 2 GB oo RAM ah.
Waxa kale oo ay shaaca ka qaadday in casriga casriga ahi uu la iman doono nidaamka hawlgalka ee Android 9 Pie. Intaa waxaa u dheer, aaladda ayaa dhalisay 1,429 dhibic imtixaanka hal-xudunta ah iyo 5,584 dhibcood imtixaanka-xudunta badan.
Si kastaba ha noqotee iyo wixii ka dambeeya macluumaadkan ayaa soo galay internetka sawirka tooska ah ee Motorola One Macro. Waxay shaaca ka qaadday in aaladda ay yeelan doonto shaashad-dhibic hal-dhibic ah. Tan waxaa lagu darayaa jir hoose oo dhumuc weyn. Waxaan sidoo kale leenahay badhanka guduudka iyo dibedda. Badhannada mugga ayaa ku yaal dhinaca midig.
In kasta oo taariikhda la siideynayo iyo macluumaadka la heli karo weli shirkaddu aysan shaaca ka qaadin, waxaan rajeyneynaa in Motorola One Macro la sii daayo dhowaan.
Motorola waxay raacday waddo xiiso leh oo leh moodalladaas. Haddii One Macro uu awood u leeyahay inuu dammaanad qaado qiimo wanaagsan oo lacag ah, wuxuu si fudud u qabsan karaa dadka isticmaala. Waa run in aysan ahayn dhammaad sare laakiin waxay lahaan kartaa waxa ay ku qaadaneyso isticmaalka maalin kasta iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin.